အရိုးရှင်းဆုံးနာရီ ၂ Android အတွက်ဒေါင်းလုပ် APK
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » အရိုးရှင်းဆုံးအချိန်မှတ်နာရီ 2
The Simplest Stopwatch2APK
Simplest Stopwatch2သည် Google Play တွင်လူကြိုက်အများဆုံး stopwatches တစ်ခု၏ဒုတိယလှိုင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပေါ့ပါးပြီးနောက်ဆုံးတွင်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းများကိုသာထိပုတ်ပါ။
သင်စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Customizer ကိုဖွင့်ရန်ဖန်သားပြင်ထိပ် ("V" သင်္ကေတ) ကိုသာနှိပ်ပါ။ နောက်ခံပုံသဏ္theာန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဂဏန်းများ၏အရောင်ကိုရွေးပါ! ဒါမှမဟုတ်ပင်ပုံသဏ္shapeာန်ကြောင့်အဖြစ်ကောင်းစွာမိမိကိုယ်ကို
အကယ်လို့သင်အဲဒါကိုပိတ်လိုက်ရင်၊ ဆက်လုပ်သွားမှာသေချာတယ် (သင်မှတ်မိသလား၊ အလွန်ရိုးရှင်း!) ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးဘူး။ ဖော်ပြချက်တွင်ဤမျှလောက်များစွာသောစာလုံးများကိုမည်သူမျှမဖတ်ပါ
Caller ID အင်္ဂါရပ်
Simplest Stopwatch2တွင်အခမဲ့ခေါ်ဆိုသူ ID ရှိသည်။ ၎င်းသည်သင့်အတွက်ခေါ်ဆိုသူများကို - သင်၏အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲမှမဟုတ်သူများကိုပင်ခွဲခြားဖော်ပြပေးသည်။ Caller ID ၏ရလဒ်များကိုခေါ်ဆိုပြီးနောက်သင်နှင့်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုသင်၏လိပ်စာစာအုပ်သို့တိုက်ရိုက်သိမ်းဆည်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင်သည် Caller ID ကိုအချိန်မရွေးအက်ပ်မီနူးချိန်ညှိချက်များ (သို့) ခေါ်ဆိုမှုမျက်နှာပြင်ချိန်ညှိချက်များတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာများကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။
4.88 ကို MB